यो फुलले गर्दछ क्यान्सर, सुगर र उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण, औषधीय गुणले हुन्छ भरिपूर्ण ! – Sandesh Press
May 16, 2021 556
काठमाडौँ । जसको प्रयोगले शरिरमा Hypoglycemic effect गर्ने हुनाले रगतमा भएको चिनीकोमात्रा घटाउन महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । यसमा रहेका Alkaloid ले Pancreas को Beta Cell लाई शक्तिशालि बनाउने भएकाले Pancreasले उत्पादन गर्ने Harmon Insulin को उत्पादन र वितरण सन्तुलित मात्रामा हुने गर्दछ ।
Prevनेपालमा कहिले घट्ला कोरोना संक्रमण ? यस्तो भन्छन् विज्ञ